कस्ले कति भेडा जम्मा गर्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा नै चलेजस्तो देखिन्छ| Nepal Marga
कस्ले कति भेडा जम्मा गर्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा नै चलेजस्तो देखिन्छ
नारायण गाउँले /
तपाईंलाई याद छ ? यही महामारीलाई देखाउँदै भारतबाट २० दिन पैदलै हिँडेर देशको बोर्डरसम्म आइपुगेका सुत्केरी मजदुरलाई आफ्नो देश छिर्न दिइएको थिएन ! बोर्डरसम्म आइपुगेर पनि दार्चुलाका वासुदेव भट्टले आमाको मुख देख्न पाएनन्, मृत्युको खबर सुने, दागबत्ती दिन पाएनन्, किरिया बस्न समेत देश छिर्न दिइएन । ज्यानको बाजी थाप्दै महाकालीमा हाम्फालेर देश छिर्न सफल युवालाई प्रहरीले आतङ्ककारीझैँ नाङ्गै गाउँ घुमाएको तस्बीर धेरेको आँखामैं होला । कैयौं दिन बोर्डरपारि नेपाली मजदुरले बिजोग र नारकीय जीवन बिताए ।
महामारीसँगै रोजगारी गुमेर खाड़ीमा फसेका मजदुरले पाएको दुःख अवर्णनीय रह्यो । तिनले कतैबाट राहत र आश्वासन पाएनन् । कैयौं हप्ताको बिचल्लीपछि तीसँग उद्धारको नाममा तेब्बर भाड़ा असुलियो, जबकि सर्वोच्चले निःशुल्क उद्धार गर्ने आदेश दिएको थियो । काठमाडौंमा बस्न र खान सकस भएपछि कैयौं मान्छे पैदल नै घर निस्किए । सानो सानो व्यवसाय र मजदुरी गर्नेले भोकसँग हारेर सड़कमैं एक छाक तातो खानाका लागि लाइन लागे । राज्यले तिनको उल्टो मजाक उडायो । यहाँसम्म कि निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाई बदर गर्न भन्दै सरकारले अदालतको ढोका ढकढक्यायो । सरकारसँग स्रोत नभएको तर्क थियो । हजारौंले काम गुमाए, व्यवसाय गुमाए तर कसैले एक सुका राहत या सहयोग पाएको सुनिएन ।
आज परिस्थिति उस्तै छ । भाइरसका नयाँ स्ट्रेनहरू विकास हुँदै छन् । सिङ्गो विश्व महामारी कसरी फैलिन नदिने र कम्तिमा एउटामात्रै भए पनि नागरिकको ज्यान कसरी बचाउने भन्नेमा चिन्तित छ, भौतिक दूरीको अभ्यासमा छ तर नेपालमा भने सरकार आफै कसरी भीड़ जम्मा गर्ने भन्नेमा व्यस्त छ । अरू पनि यही स्पर्धामा छन् । हिजो विदेशमा फसेको बेला उद्धार गर्ने पैसा नभए पनि आज उखान र गाली सुनाउन मान्छे जोड्ने पैसा राज्यसँग छ ।
इतिहासकै कठिनतम घड़ीमा सिङ्गो देश यतिबेला विभाजित र ठप्प छ । कैयौं संवेनदशील मुद्दाहरू पेन्डिङ् छन् र निकास दिनुपर्ने सर्वोच्चदेखि मुख्य न्यायाधीशहरू हप्तौंदेखि एउटै प्रश्नमा अल्झेका छन् । दिनहुँ देशको आर्थिक र स्वास्थ्य सङ्कटबारे ब्रिफिंग गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री हजारौंको भीड़ जम्मा गरेर उखान सुनाउँदै छन् । कस्ले कति भेड़ा जम्मा गर्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा नै चलेजस्तो देखिन्छ ।
न शासकलाई राजश्वले तलबसम्म नधान्ने स्थिति प्रति चिन्ता छ, न दुई छाक र एक्सरो लुगा जोहो गर्न नसकेर गालीगलौज सहँदै दशैँकै दिन भारत छिर्न बाध्य मजदुरप्रति कुनै चासो छ । बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, व्यापारघाटा जस्ता शीर्षकमा कुनै आमसभा भएको सुन्नुभएको छ ? यो सङ्कटमा सबैलाई जोड्नुपर्ने दायित्व भएको सरकार कसरी हरेक क्षेत्र फुटाउने भन्ने खेलमा छ । पार्टी फुटेको छ, न्यायालय फुटेको छ । पत्रपत्रिकादेखि नागरिकसम्म फुटको अवस्थामा पुगेका छन् ।
यो सबै के र कसका कारण हुँदै छ रु केही व्यक्तिमा रहेको कुण्ठा, ईगो, स्वार्थ र लोभका कारण होइन रु म मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हठले होइन रु म नभए तँ किन हुने भन्ने अहम्ले होइन रु कतिन्जेल तिनै अहम्, स्वार्थ र ईगोको पछाडि भेड़ा जस्तै कुदिरहने रु हाम्रो टाउको गनेर एउटाले तेरोभन्दा मेरो भेड़ा धेरै भन्छ, सकिन्छ । कतिन्जेल सङ्ख्या बनिरहने ?
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्दै आएको छ - प्रेस वक्तव्य
भारतमा २४ घण्टामा ६८ हजार बढीमा कोरोना सङ्क्रमण, २९५ जनाको ज्यान गयो
गैरआवासीय नेपाली सोसल क्लब (एनसीसी) ओमानको नयाँ कार्यसमिति चयन
मोदीको भ्रमणको विरोधमा बंगलादेशमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा चार जनाको ज्यान गयो